Alarobia, Febroary 10, 2016 Douglas Karr
Rehefa namindra ny tranokalanay nankany Flywheel izahay, dia tsy noterenay hiditra amin'ny fifandraisana SSL (ny https: // url izay miantoka fifandraisana azo antoka). Mbola tsy tapa-kevitra isika amin'izany. Azontsika atao ny miantoka fa azo antoka ny fandefasana form sy ny ampahany amin'ny ecommerce, fa tsy azo antoka ny momba ny lahatsoratra antonony hamakiana fotsiny. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia fantatray fa ny rohy kanonika dia mampiseho fiarovana sy tsy fandriam-pahalemana. Tsy mbola namaky betsaka momba ny